Fakan-tsary Mini Spy - Fakan-tsarimihetsika Pocket Pen Camera miafina 170 Degre Wide Angle (SPY018) | Vahaolana OMG
Fakan-tsary Mini Spy - Fakan-tsarimihetsika Pocket Pen Camera miafina 170 Degre Wide Angle Lens (SPY018)
True 1080P Full HD Super Video Fahatelo: 1920x1080P amin'ny lens 30fps sy 170 degre tena lehibe ny zoro zoro hahazoana sary lehibe kokoa mandritra ny fandraisam-peo. Ary ny voadio Wide Dynamic Range (WDR) voadio dia afaka mamokatra sary na horonan-tsary tsaratsara kokoa mifototra amin'ny teknolojia feno hd.
Wi-fi Connection and View: Ny tranokalan'ny rindrambaiko wifi dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny fakantsary amin'ny alalan'ny finday (Andriod na iOS platform compatible), manitsy ny angona fijerena ny fakan-tsary, stream na horonan-tsary avy amin'ny app Finalcam.
Fitaovana maro samihafa: Manoratra horonantsary na manangona sary amin'ny fampiasana fakan-tsarimihetsika, mametraka ny mozika an-tserasera amin'ny fidirana mozika ampiasaina ho toy ny fakantsary fiarovana an-trano na manomboka ny fandefasana horonam-peo ampiasaina ho dictaphone mandritra ny fivoriana na fanangonana horonan-tsary raha ilaina.
Batterie à batterie: Manana baoritra baoritra 560 mAh izy io, manomboka amin'ny ora fahenan'ny 90 minitra, manomboka amin'ny ora 20 mba hametahana banky angovo 10000mah (banky angatahana). Mila camera sd ny fakantsary mba hiasa.
Mora sy mora ampiasaina: Famolavolan-tsokajy H.264 mba ahafahana mikaroka lahatsary misimisy kokoa; Loop Recording dia voafafa ho toy ny 3 / 5 / 10 minitra video clips araka izay tianao. Ny fanohanana ny karatra SD micro XGB sy ny daty / ora famantarana ny daty dia azo ovaina. Ny fiarovana HDMI dia azo alaina (Sarintany micro sd sy cable HDMI tsy tafiditra).
Manoritra horonantsary na manangona sary amin'ny fampiasana fakan-tsary.
Ampidiro ny firaketana an-tserasera amin'ny fametahana fampiasa rehefa ampiasaina amin'ny fakantsary fiarovana an-trano.
1920 x 1080P ao amin'ny 30fps sy 170 ho an'ny mari-pamantarana ankapobeny amin'ny ankapobeny hahazoana maso lehibe kokoa mandritra ny fanoratana.
Manomboha ny asa fandraiketam-peo amin'ny alalan'ny fampiasana dictaphone mandritra ny fivoriana na fanangonana horonan-tsary raha ilaina.
Ny modely fananganana wifi dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny fakantsary amin'ny finday (Android na iOS platform compatible).
Ny daty video / ny mari-drano dia azo ekena. HDMI output (misy HDMI tsy misy).
Loop Recording dia voafafa ho toy ny 3 / 5 / 10 minitra misy horonan-tsary asehonao ary manohana ny karatra SD 64GB (SD card tsy misy).
WF92 natsangana tao amin'ny batterie batterie 560 mAh, nanoratana ny fotoana hatramin'ny 90 minitra, na mihoatra mihoatra ny ora 20 mba hampidirana banky angovo 10000mah (banky angatahana).
Full HD Spy Camera:
1920x1080p sarobidy fakan-tsary miafina, mora ampiasaina ary azo ampiasaina.
Ampifandraiso amin'ny Wifi hifanaraka amin'ny mari-pijerena ny fakantsary, stream na live video avy amin'ny fampiharana Finalcam app.
Fitaovam-pandrefesana tafiditra ao anaty baoritra:
Built in batteries rechargeable 560 mAh, manomboka amin'ny horonam-peo manomboka hatramin'ny 90 minitra.
4.5 X 1 X 0.6 santimetatra
Fakan-tsary Mini Spy - Fakan-tsarimihetsika Pocket Pen Camera miafina 170 Degre Wide Angle Lens (SPY018) no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
6477 Total Views 6 Views Today